China F-201346 buru ibu maka Rexroth A4VG125 pistin pump suppliers na ụlọ ọrụ | Elephant Fluid Ike
Akụkụ dị mkpa nke mgbapụta plunger bụ agba. Ọ bụrụ na egwuregwu dị na mbata ahụ, enweghị ike ịkpochapu ụzọ ụzọ abụọ nke esemokwu esemokwu n'ime mgbapụta hydraulic. N'otu oge ahụ, a ga-ebibi ọkpụrụkpụ nke ihe nkiri mmanụ nke hydrostatic nke esemokwu esemokwu ọ bụla, na-ebelata ojiji nke mgbapụta mgbapụta. ndụ. Dị ka ozi nke onye na-emepụta hydraulic si nye ya, nkezi ọrụ ndụ nke iburu bụ 10000h, ọ dịkwa mkpa iji dochie ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ ma ọ bụrụ na uru a karịrị. Enweghi ike ichoputa ihe ndi mmadu wepuru n'enweghi ihe nlere ndi okacha amara, ma enwere ike inyocha ha. Ọ bụrụ na ịchọta ma ọ bụ achagharị na-ahụ n'elu ala ala, a ghaghị dochie ha.
Mgbe ị na-edochi bekee, ekwesịrị ị paida ntị na mkpụrụedemede bekee na ụdị nke biarin mbụ. Imirikiti ntinye mgbapụta na-eji nnukwu ikike ebu ibu. Zụta ihe nrụpụta izizi na nkọwapụta nke izizi. Ọ bụrụ na ị dochie akara ọzọ, ị ga-agakwuru onye nwere ahụmịhe nke na-ebu ya ka o lee anya na tebụl ma gbanwee, ebumnuche bụ iji nọgide na-enwe ọkwa ziri ezi na ikike ibu nke ịgba.
Nfuli axial plunger nwekwara ike iji ntụgharị ntụgharị ugboro iji chekwaa ike eletriki. N'ime usoro mmepụta ihe, a na-ejikarị pọmpụ axial plunger na-arụ ọrụ n'okpuru nrụgide ma ọ bụ igba mmiri iji dozie ọnọdụ ọrụ. Mgbe nrụgide n'ezie karịrị nrụgide achọrọ, a na-agbanwe ya site na valvụ enyemaka iji mee ka nrụgide ọrụ ya kwụsie ike ma hapụ ka valvụ enyemaka ahụ hapụ ngafe. The moto e ọsọ na zuru ọsọ ugboro ugboro, na ike oriri na-anọgide na-agbanweghi agbanwe.
Efere valvụ nwere ụdị abụọ: nkesa ụgbọelu na-ekesa ma kesaa. A na-edozi esemokwu nke nkesa na-ekesa site na-egweri mgbe ncha na nkesa nkesa nke cylinder dị ntakịrị: mgbe uzo nke na-ekesa ala ahụ dị omimi, uzo ahụ kwesịrị ijupụta na "teknụzụ teknụzụ elu. "Tupu ị na-egweri Emegharịla anya na-enweghị isi iji gbochie oyi akwa ọla kọpa ahụ site na ịchapu ma ọ bụ nchapu mmanụ site na ntọala ígwè.
Mgbe ị na-eji jubiga ókè iji dozie nrụgide na nrugharị, ụfọdụ njupụta na-ejupụta na sistemụ mbụ, na-ebute ike na-abaghị uru nke mgbapụta pọmpụ na arụmọrụ arụmọrụ dị ala. Ọ bụrụ na ejiri ihe ntụgharị nchekwa Chuangjie mee ihe, enwere ike idozi valvụ ahụ mechiri emechi, site na inverter nchekwa nchekwa n'onwe ya na-edozi nrụgide ọrụ iji jigide nkwụsi ike nke nrụgide ọrụ, wee na-akpaghị aka na-agbali nrụgide nke ngwaọrụ ahụ. Ghọta njikwa na-akpaghị aka, si otú a na-echekwa ike oriri. Uru kasịnụ nke usoro mgbanwe a bụ na ọ nwere ike belata ike ọrụ na-arụ ọrụ nke mgbapụta piston axial, na mmetụta ịchekwa ike nwere ike iru karịa 30%.
Ndewo, Ike Elephant bụ otu mmepe dị elu nwere ikike dị ike, na-enye ngwaahịa dị elu, ngwọta zuru oke na ụlọ ọrụ ọrụ teknụzụ nke mbụ na ndị ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ nke iguzobe azụmahịa na iguzosi ike n'ezi ihe, na-ejide ahịa na mma, na-enwe ọganihu na ọganihu. Ọ na-aga n’ihu na-arịgo elu elu ọhụụ site na ọsọ ọsọ ma na-enye aka na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mba. Nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie iji obi ike zụta ngwaahịa kachasị amasị ha. Anyị ga-eji obi gị niile jeere gị ozi.
Nke gara aga: A2FE160 180 pistin mgbapụta akụkụ ahụ mapụtara Big agba T7FC070
Osote: 1P40 NTIRKWIRKWIRKWIRKWALKWTRKWỌ 1LỌ 1SPOOL
A2FE160 180 pistin mgbapụta akụkụ ahụ mapụtara Big agba ...